Kuthetha ukuthini ukuphupha imvula? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Ukuphupha imvula kunokutolikwa ngeendlela ezininzi, kweli nqaku siza kubona ezona ziqhelekileyo. Imvula ikwayinto ebaluleke kakhulu kwiinkalo ezininzi zoluntu, njengoko isisalathiso sokuchuma komhlaba, ulawula inqanaba lamanzi okusela kumadama, ucoce umoya ongcolileyo kwizixeko ezikhulu, njl.
Nangona kunjalo, ukugqithisa kwayo kukwangunobangela wokukhathazeka, okufana nezikhukula, ukuntywila, ukukhukula komhlaba ochumileyo, njl. Ngamanye amagama, kufuneka uhlalutye ngononophelo iphupha ngale nto ukuze ukutolikwa kungqinelane nenyani.
1 Ukuphupha imvula
2 Imvula njengesilumkiso sezempilo
3 Ngaba waphupha ukuba imvula yayikumanzisa ngokupheleleyo?
4 Ngaba imvula ephuma ephupheni lakho iwela endlwini yakho?
5 Iphupha lokuhamba emvuleni
6 Ukuphupha ngemvula ethambileyo, ukuqhuma
7 Ukuphupha imvula ekhatshwa ziigale kunye nesaqhwithi esinamandla
8 Iphupha leemeteor shawa
9 Ukuphupha ngeshawa yemeteor
10 Iphupha lemvula ebusuku
Ukuphupha ngemvula akuqhelekanga, kodwa kugcwele iintsingiselo ezinokukunceda uqonde okuninzi ebomini bakho. Amanzi yenye yezona zinto zine zibaluleke kakhulu emhlabeni kwaye kwiinkcubeko ezininzi oko kuthetha ukuba nyulu, ukuhlaziya nokucoca umphefumlo kunye nomzimba nengqondo.
Imvula njengobabalo lukaThixo
Ukuba awumanzi kwaye wabona kuphela okanye weva ingxolo yemvula ewela phantsi komhlaba xa ulele, luphawu lokuba uyakukhuselwa lubabalo oluhlaziyiweyo lukaThixo malunga nazo naziphi na iingxaki onokuthi ujongane nazo. Ngamanye amagama, luphawu olugqwesileyo kwaye olunamandla olunokukunceda ngokuqinisekileyo ukuba uziva unalo naluphi na uhlobo lokudimazeka.
Imvula njengesilumkiso sezempilo
Ukuphupha imvula kunezinto ezininzi ezintle, nangona kunjalo amandla Ingxolo yemvula ikwasisimo sokumisela ukuze sikwazi ukulitolika ngokuchanekileyo iphupha lakho, kuba imvula enamandla kakhulu, elandelwa ngumbane kunye neendudumo zingabonisa isilumkiso esinamandla esivela kwindalo yonke ukunqanda kwisifo esithile esibalulekileyo.
Ngamanye amagama, ukuba unalo eli phupha, musa ukothuka, kodwa jonga ugqirha kwaye ufumane uvavanyo olupheleleyo, njengoko unokufumana isifo esithile kwinqanaba lokuqala kwaye ube nokwenzeka ukuba usinyange ngokulula.
Ngaba waphupha ukuba imvula yayikumanzisa ngokupheleleyo?
Luphawu olugqwesileyo kwaye lubonisa ukuhlaziywa kwamandla, ukucocwa ngokomoya ukuze ufezekise iinjongo zakho.
Ngaba imvula ephuma ephupheni lakho iwela endlwini yakho?
Ukuba kunjalo, ingxaki yosapho inokwenzeka kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Hlala uqaphele kwaye umamele ngakumbi abantu abahlala nawe ukuze baqonde ngcono iimpikiswano ezinokwenzeka. Ukuba imvula inetha kwindawo engenanto kwaye ivelisa udaka kunye namanzi amaninzi anombala omnyama, kulungile ukuba ungazilungiselela iindaba ezingaqhelekanga ezinokuzisa amaxesha anzima. Kodwa yokuphuculwa okunokwenzeka.
Imvakalelo yemvula ikwangumba obaluleke kakhulu kolu hlobo lwamaphupha, kuba sithetha ngenkangeleko, ukomelela, kodwa kufuneka sihlalutye umkhombandlela. Kule meko, ukuba imvula ina kakhulu ngokwecala, okanye nokuba ujonge ezantsi, oku kuthetha ukuba kuya kufuneka unike ingqalelo ngakumbi kubahlobo bakho kwaye ngexesha elifutshane kungakho umlo kwaye unganyanzelwa ukuba uziqhelelanise.
Kwaye ukuba kwenzeka ukuba ubone umkhukula ephupheni lakho, ngaphandle kokumanzi okanye ukuchaphazeleka nangayiphi na indlela, luphawu lokuba uya konwaba kwaye usombulule iingxabano ezininzi zangaphambili.
Iphupha lokuhamba emvuleni
Eli phupha lithetha ukuba uhamba phantsi kwemvula uzifaka kuwo, kwaye wonwabile ngawo, kubonisa ukuba uyadlula okanye uza kudlula, kwixa elizayo, ixesha elimnandi nelineziqhamo ubomi bakho. Amaxesha amnandi ayeza kunye notshintsho oluqinisekileyo oya kuthi ulisebenzise kakhulu. Ke ngoko, ukuphupha uhamba emvuleni ngelixa ekufunxa kuhlala kungumqondiso olungileyo.
Ukuphupha ngemvula ethambileyo, ukuqhuma
Kubonisa ukuba unenkxalabo engabalulekanga kakhulu, kodwa onokuyicombulula ngokukhawuleza nangokulula, ke emva kokuphupha ngemvula ethambileyo akufuneki ukuba uzikhathaze ngazo. Uya kuzoyisa ngaphandle kwengxaki.
Ukuphupha imvula ekhatshwa ziigale kunye nesaqhwithi esinamandla
Lo nto isixelela ukuba ukwixesha lobomi bakho notshintsho olukhulu olubalulekileyo ekuya kufuneka ujongane nalo, kubandakanya ukujika okungalindelekanga ebomini bakho okuza kuza ngequbuliso, ungakhange ubabone besiza. Oko akuthethi ukuba zilungile okanye zimbi, zilutshintsho nje olukhawulezileyo, apho kuya kufuneka ulungele ukujongana nazo ngempumelelo xa zifika. Ke ngoko, ukuphupha imvula enkulu ihamba neegales kwaye yomelele okwethutyana, kufanele ikwenze uqaphele ukuba ukulungele ngokupheleleyo oku.
Iphupha leemeteor shawa
Ikwayimvula, nokuba akukho manzi. Kule meko, ukuphupha nge-meteor shaft kubhekisa kwinto yokuba ungumntu onomdla omkhulu kwaye ngaphezulu kwayo yonke into inomdla wokuzinikela kwizenzo ozenzayo kwaye ulwe nezinyo kunye nezikhonkwane zazo, ke impumelelo iya kuza loo mzamo kwaye uya kuyiphumeza into oceba ukuyenza.
Ukuphupha ngeshawa yemeteor
Enye imvula ayinanto yakwenza namanzi. Ngokuchasene nesithuba sangaphambili, ukuphupha nge-meteor shawa kusixelela ukuba singabanini boyika olukhulu kunye nokungazithembi, nokuba kungenxa yokuba sijamelene nenqanaba elibalulekileyo ngaphandle kokuqiniseka ngempumelelo kuyo, okanye ngokulula kukuba sisoyika ukusilela. ukuya ukufa. Ke ngoko, eli phupha likuthintela ukuba ujongane noloyiko ngenkalipho nangokuzimisela.
Iphupha lemvula ebusuku
Siphinda simanzi kwakhona, ndiyathetha, ukuphupha imvula ngamanzi, ngengqondo eqhelekileyo. Ukuba ephupheni lakho, kusebusuku xa kunethayo kwaye kumanzi, oko kuthetha inkululeko yomntu, oko kukuthi, kubonisa ukuba kungekudala uza kuzisusa zonke ezo ngxaki kunye neengxaki ezikukhathaza mvanje uzenze ungakuvumeli uphumle. Ibonisa ukuba uza kuphumelela kwaye ube nethamsanqa kwixa elizayo, ngokubanzi kunye nakwezothando.